Batsira Kutungamira Kupandukira Kupandukira | Martech Zone
Nguva yekutanga yandakasangana Maka Schaefer, Ini ndaive pakarepo ndichionga ruzivo rwake uye nzwisiso yakadzika. Maka anoshanda nemakambani anotungamira maitiro ekuvandudza kwavo kushambadzira. Kunyange ini ndiri nyanzvi inokwanisa mune ino indasitiri, ndinotarisa kune vashoma vatungamiriri vechiratidzo - Mako ndomumwe weavo vatungamiriri wandinoteerera. Kunyange Maka ari murwi ane ruzivo rwekushambadzira, ndakafarirawo kuti akasvetukira mumusoro-kutanga nekutengesa vezvenhau.
Ini ndaive naMark pane yangu Martech Zone Kubvunzurudza podcast, akasangana naye pachiitiko, uye hushamwari hwakakura. Ishamwari yakanaka kuva nayo, unapologetic munzira yake yekuita kuti unzwe zvaunoda. Takabatana pa Dell Mwenje podcast uko kwaMark naDell's B2B Influencer Kushambadzira & Zvemukati Kusika mutungamiri, Konstanze Alex, akaona mukana wekutaridza tarenda rinoshamisa iro Dell Technologies rine pasi pemhando dzadzo. Handina kumbobvira vaita Podcast akatevedzana seizvi uye Mark wakandisunda kuti rubatsiro kutsvakurudza uye kubudisa zvinoshamisa dzinoratidza. Ini handimbofa ndakamubhadhara nekutora mukana pandiri!
Saka, chimbofungidzira kushamisika kwangu pandino gashira pasuru mune tsamba kubva Schaefer Kushambadzira Mhinduro. Pabhokisi paive newindo mune zvirimo, a Kushambadzira Rebel chira.
Ndakavhura bhokisi uye mukati maive nekiti yekuziva ye, zvaitaridzika kunge, zvisina hukama trinkets kana zviyeuchidzo:
Kana iwe ukatarisa padyo, chinhu chimwe nechimwe chakanyatso-ruoko-chakamakwa ine peji peji:
Sipo Yakagadzirwa Nemaoko - Peji 9
Iyo Westworld Yemahara Kunwa Chiratidzo - Peji 199
Glossier Ganda Salve - Peji 232
Nzou yakamonera - Peji 232
Zvakanaka, ikozvino ndave nekushamisika uye ndave kutobaya-baya muindekisi, girosari, nemapeji akanyorwa. Uye, apo ini ndichivhura bhuku, ini ndinowana ichi chinoshamisa, pachezvangu chakasainwa chinyorwa kubva kuna Mako:
Zvakare, pane kadhi rine chinyorwa chako uye chekunamatira Chekupandukira palaptop yangu.
Njere… Maka zvachose andiyamwa!
Asi zvakaitwa naMako nekuita izvi, izvo pachazvo, chidzidzo. Ndiri kugovera bhuku raMark newe, asi akatanga runyoro rwakandikurudzira.
Nei Iri Bhuku Rinokosha?
Mutengi mutsva wangu akandibvunza nezve zano ravakatumira. Boka ravo rekutengesa rinozoona tarisiro, kuwana maemail adhiresi kubva kune vechitatu mapato, uye kugadzirisa otomatiki emaimisi ekutanga kwavari. Vakandiudza kuti vaive neshungu nezve yakaderera-yekudzvanya-kuburikidza nemitero uye yavo yese kuendesa. Ndakavaudza kuti vanofanirwa kunge vari… uye ivo vanofanirwa kumira kumisikidza makambani aya. Ivo vaive vachiparadzanisa tarisiro, kwete kuvada.
Mune manifesto yaMark, uyu ndiwo Mutemo # 1:
Regedza Kuita Zvinovengwa Nevatengi.
Iyo Manifesto yeKutengesa Kwevanhu-Inotungamirwa
Tiri kushanda kuburikidza nhevedzano yeshanduko shanduko izvozvi mukati mekambani, zvese izvo zvakavakirwa pane hwaro hwekuvaka kuvimba uye kushandisa kukoshesa kwavakatomisikidza nevatengi vavo. Tiri kufambisa kambani kuti ive munhu.
Ini ndinongova pakati nepakati Kushambadzira Kumukira, asi mukutaura naye, ini zvino ndanzwisisa kuti sei achifarira kukosha kwebhuku iri. Tsvagurudzo, nzwisiso, uye zvidzidzo zvezviitiko zvinofanirwa kuzunza hwaro hwechinenge chidzidzo chese chawakasundirwa pamusoro pemakumi mashoma apfuura.
Iko kupandukira kunodikanwa uye ichi chinyorwa ndiri ini kukwidza mureza uye kubatsira kutyaira shanduko.
Chii Chaunotengesa Kumukira Chichakudzidzisa Iwe
Njodzi dzakadii dzevatengi mafambiro mhedzisiro inofungidzirwa yeshanduko yakatanga makore zana apfuura.
Nei mabhizinesi achifanira kuvakwa pane zvevatengi-zvinogadzirwa zvekushambadzira panzvimbo pechinyakare kushambadzira.
Idzo shanu dzechokwadi chevanhu chokwadi pamoyo webudiriro yekutengesa zano.
Nei kuvimbika kwevatengi uye kutengesa mafenicha kuri kufa uye zvaunofanira kuita nezvazvo izvozvi.
Maitiro ekubatsira ako akanakisa vatengi kuita kushambadzira kwako.
Anogona kutora matanho ekupa iyo yekukurumidza kosi-kururamisa kwemabhizinesi eese saizi.
Ndiri kuonga kwazvo kufonera Maka shamwari uye ndinokurudzira kuti utore bhuku iri nekukasira. Iwe unozogona kuve nekukasira uye kunokatyamadza kukanganisa pane ako kushambadzira kuyedza.
Verenga zvimwe nezve Kushambadzira Kupandukira
Tags: Maka Schaeferkushambadzira kupandukira